शीर्षक यो लेख “किशोर-किशोरी आनुवंशिक कमजोर शुक्राणु छ?” हन्ना डेवलिन द्वारा लेखिएको थियो, विज्ञान संवाददाता, लागि theguardian.com बुधबार 18 औं फरवरी 2015 06.01 UTC
किशोर छोराका पहिले नै चिन्ता प्रशस्त छ: स्पट, बालिका र आफ्नो "कुरा" को आकार, एड्रियन तिल यो गरेका छन् अनुरुप. आनुवंशिक कमजोर किशोर शुक्राणु भएको समस्या साँच्चै यो सूचीमा थप गर्नु आवश्यक छ?
क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय मा वैज्ञानिकहरूले यो भन्दा बढी आइपर्ने अध्ययन पूरा पछि मामला छ सुझाव छ 24,000 आमाबाबु र छोराछोरीले. विश्लेषण आमाबाबु र सन्तान बीच साना आनुवंशिक मतभेद मा केन्द्रित, अण्डा वा शुक्राणु कोशिकाहरुमा कपी त्रुटिहरू कारण हुन ग्रहण गर्दै छन्, जो.
अध्ययन भनेर देखाउँछ, औसत मा, बाबु आमा आफ्ना छोराछोरीलाई कम्तिमा छ पटक यी परिवर्तन को रूप मा धेरै मा पारित. यो शुक्राणु डीएनए बुबाको आनुवंशिक क्रम को एक कम विश्वासी प्रतिकृति छ सुझाव, शुक्राणु कोषहरू समय महिला अन्डा सेल भन्दा बढी डिभिजनका भइरहेको छ शायद किनकी अवधारणा हुन्छ.
अधिक उल्लेखनीय दाबी - र सबै भन्दा ध्यान खिच्न कि एक - किशोर छोराका शुक्राणु कोठरीमा त्रुटि दर बारेमा छ कि छ 30% जवान मानिसहरू लागि भन्दा उच्च.
अनुसन्धाताहरू किशोर बाबु को छोराछोरीलाई त्यस्तो अटिजम रूपमा असन्तुलनको लागि एक उच्च जोखिम छ किन यो बुझाउन सक्नुहुन्छ भन्न, पागलपन र स्पाइना बिफिडा.
कागज लेखक, पत्रुस Forster, भने: "15 वर्षीया छोराका बच्चाहरु छ बारे 30% जवान मानिसहरू सन्तान भन्दा बढी उत्परिवर्तन. यो एक जे आकारको वितरण हो। "
यो सम्भवत को जन्म दोष को एक जोखिम अनुवाद 2% किशोर छोराका लागि, को एक औसत जोखिम संग तुलना 1.5%, उहाँले भन्नुभयो.
Forster भने: "यो सारा शुक्राणु उत्पादन प्रणाली सुरुमा खतरा बढी त्रुटि यो अझै अनुकूलित छैन ... छ कि हुन सक्छ।"
उहाँले सिद्धान्त पनि विचार संकेत बताए, अर्को पत्रकार द्वारा, किशोर छोराका बढी masturbated भने कि, तिनीहरूले अधिक तेजी यस "suboptimal" अवधि माध्यम ले आफ्नो तरिका काम गर्न सक्षम हुन सक्छ.
किशोर-किशोरी यो सुझाव पालन अघि (उनि पहिले देखि नै यस गतिविधि गर्न समय एकदम समर्पित छैन?), यो देख लायक छ कागज नै, रोयल सोसाइटी जर्नल कार्यवाही बी मा.
करीब कुरा जे आकारको वक्र को पूर्ण अभाव छ. यहाँ ग्राफ छ, जो मलाई एक सीधा लाइन जस्तै देखिन्छ.
बाबु र आमा लागि Germline STR उत्परिवर्तन दर. तस्वीर: रोयल सोसाइटी कार्यवाही
यो किशोर छोराका लागि डाटा बुँदा लागि भन्दा उत्परिवर्तन अलि उच्च नम्बर देखाउन सक्छ भन्ने कुरा साँचो हो 20- 30 वर्ष उमेर सीमा गर्न, तर यो अझै संग बाँचेका देखिन्छ 95% रैखिक प्रवृत्ति लागि भरोसा अन्तराल. म "किशोर छोराका जीवाणु कोषहरू बूढाबूढी शासनको अपवाद हो" भन्ने निष्कर्षमा कुनै पनि कारण देख्न सक्दैनन्, लेखक जस्तै.
तपाईं कि मार्ग तल जा थिए भने, शुक्राणु मा एक बिट छली जान्छ किन तपाईं पनि सोच्नुहोला 30, तर त्यसपछि मध्य उमेर को दृष्टिकोण संग फेरि ठीक हो, यस मा एक भेट्नो छ जस्तो किनभने 30-35 श्रेणी. एक सरल व्याख्या डेटा बस एक सा शोर छ कि छ.
एलन ट्विट्टर फीड, अवस्थिति विश्वविद्यालय मा andrology प्राध्यापक, सहमत: "यो मलाई मतलब छैन. म एक जे आकारको सम्बन्ध देख्दैनौं र, जीव को मामला मा, म यो व्याख्या भनेर कुनै सोच्न सक्दैन। "
Forster धेरै जनसंख्या अध्ययन औंल्याउँछन्, किशोर बाबु विभिन्न विकारहरु संग छोराछोरी छन् सम्भावना बढी हुन सक्छ कि सङ्केतलाई जो. तर यो यस्तो परिणाम प्रत्यक्ष आनुवंशिक कारणहरू वा सामाजिक र पर्यावरणीय कारक लिंक हुनुहुन्छ कि भन्न कठिन छ. मलाई लागि, यस नवीनतम studydoes मुद्दा समाधान गर्न धेरै मत. ट्विट्टर फीड भनेझैं: "म किशोर dads लागि कुनै पनि ठूलो चासो देख्दैनौं।"
अनि ती किशोर छोराका लागि dads गर्ने छैनन्, उनको 20 पिता सुरु गर्न पर्खनु शायद अन्य कारणहरू छन्.
← अघिल्लो पोस्ट सोनी SmartWatch3द्रुत समीक्षा [भिडियो] →